काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले करिब साढे ४ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गरिने भएको छ। अपी पावरले ४ लाख ४९ हजार ३२८ कित्ता सेयर यही जेठ १८ गतेबाट लिलामीमा राखिने भएको हो। गत चैत २५ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म सेयरधनीहरुलाई निष्कासनको गरिएको हकप्रदमा बिक्री नभएको सेयर लिलामीमा राख्न लागिएको हो। यो लिलामी सेयरको न्यूनतम मूल्य...
शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको पौने २ लाख बढी सेयर बिक्रीमा
काठमाण्डौ । शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले पौने २ लाख बढी सेयर बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले संस्थापक समूहको १ लाख ८० हजार ८६६ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको छ। संस्थापक सुमन भट्टराईको नाममा रहेको १ लाख ५ हजार ४७४, एसियन डिस्ट्रिब्युटर्सको ५३ हजार ५४ कित्ता र ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्नको २२ हजार ३३८ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो। बिक्रीमा...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १.२२ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा राखिने, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक समूहको सेयर यही जेठ १३ गतेबाट लिलामीमा राखिने भएको छ। कुमारी बैंकको स्वामित्वमा रहेको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १ लाख २२ हजार २८७ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिने भएको हो। लिलामीमा राखिने सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ तोकिएको छ। बोलकबोल पेस...
शिखर इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लिलामीमा राखेको अवितरित हकप्रद सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज वैशाख २७ गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत चैत १ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले अर्थात १ः०.३ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो। जसअनुसार...
शिखर इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा भोलिसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अवितरित हकप्रद सेयरको लिलामीमा भोलि वैशाख २७ गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने भएको छ। कम्पनीले गत चैत १ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले अर्थात १ः०.३ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो। जसअनुसार कम्पनीले...
शिखर इन्स्योरेन्सको साढे ७७ हजार बढी कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अवितरित हकप्रद सेयरको लिलामीमा आज वैशाख १९ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। कम्पनीले गत चैत १ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले अर्थात १ः०.३ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका...
शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको ४५ हजार बढी कित्ता सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको ४५ हजार बढी कित्ता सेयर आज वैशाख १४ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। बैंकको संस्थापक समूहको ४५ हजार ९९१ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य १८५ रुपैयाँ तोकिएको छ। बोलपत्र पेस गर्दा न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ। यो लिलामी सेयरमा...
शिखर इन्स्योरेन्सको साढे ७७ हजार बढी कित्ता सेयर वैशाख १९ बाट लिलामीमा राखिने
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अवितरित हकप्रद सेयरको लिलामी यही वैशाख १९ गतेबाट खुला गरिने भएको छ। कम्पनीले गत चैत १ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले अर्थात १ः०.३ अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो। जसअनुसार कम्पनीले १०० अंकित दरका...
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको झन्डै ६ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाण्डौ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको झन्डै ६ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ। कम्पनीले संस्थापक सेयरधनी अनन्तकुमार गोल्याणको नाममा रहेको ५ लाख ९७ हजार ९२१ कित्ता र सुभाष संघईको नाममा रहेको ४०० कित्ता गरी कुल ५ लाख ९८ हजार ३२१ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको हो। यो सेयर खरिदका लागि कम्पनीका विद्यमान...
समृद्धि फाइनान्सको ९.४ लाख कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति?
काठमाण्डौ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले आज चैत २९ गतेबाट ९ लाख ४० हजार कित्ता बढी सेयर लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले गत फागुन ८ गतेबाट फागुन २९ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएको ९ लाख ४० हजार ४६६ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा संस्थापक समूहको ८ लाख ६७ हजार ३६६ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ७३ हजार १०० कित्ता छन्। यो लिलामी...